Tanzania njem nleta na-ekwupụta ọkwa dị ukwuu na atụmatụ azụmaahịa ebumnuche
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Tanzania » Tanzania njem nleta na-ekwupụta ọkwa dị ukwuu na atụmatụ azụmaahịa ebumnuche
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ndị ọrụ njem njem Tanzania na-eme atụmatụ iji kpọbata ndị isi njem njem mba ụwa na Tanzania na atụmatụ ha kachasị ọhụrụ iji kwalite mba ahụ dị ka ebe nchekwa, n'etiti Covid-19 oria ojoo, nke kporo isi ahia ndi njem.
Associationtù Ndị Ọrụ Na-ahụ Maka Njegharị na Tanzania (TATO) na-arụ ọrụ ugbu a elekere, na nnọchite nke ndị otu narị atọ na iri atọ, iji wepụta akwa nnabata maka ọtụtụ ndị ọrụ njem, n'oge ọ bụla.
"Anyị na-arụ ọrụ oge iji mejuputa mkpokọta nzukọ izugbe TATO kwa afọ (AGM) mkpebi nke iweta ọtụtụ isi ndị ọrụ Global Travel, na ụgwọ anyị, dịka akụkụ nke atụmatụ ọhụrụ iji zụta ebe anyị na-aga," ka Onye isi ụlọ ọrụ ahụ, Mr Sirili Akko kwadoro.
Nke a bịara dịka ihe ịtụnanya, ebe ndị ọrụ njegharị na-anwa ịgbasa atụmatụ ahịa ya iji dọta ọtụtụ ndị ọbịa ma bulie ọnụọgụ ndị njem iji lanarị mwakpo nke asọmpi oke egwu site na ebe ndị ọzọ, na mbido ọrịa COVID-19.
N'ezie, ndị na-ahụ maka ụlọ ọrụ na-ahụ maka njem nleta na-ekwu na mbọ a, n'eziokwu, na-egosi ngbanwe akụkọ ihe mere eme n'usoro ịzụ ahịa, dịka ụzọ ndị na-eme njem nlegharị anya si dị, na-agagharị agagharị na mba ofesi iji kwalite ebe ndị njem nleta na mba ahụ ka ukwuu.
Onye isi oche TATO, Mr Wilbard Chambulo tụgharịrị n'echiche nke ịpịpụta ndị na-eme njem njem nnabata maka nnabata tupu nzukọ kwa afọ na ndị otu ahụ kwenyere ma wepụta mkpebi maka mbugharị a ga-egbu ozugbo.
"TATO echepụtala echiche ịgbanwe usoro ahụ n'ihi na ọ na-eme ka ahịa na akụ na ụba dị ukwuu iji weta ndị na-eme njem iji hụperetụ ihe ndị sitere n'okike nke mba ahụ karịa ndị otu anyị soro ha na eserese eserese" Maazị Chambulo kwuru.
Tanzania meghere ọdụ ụgbọ elu ya maka ụgbọ elu ndị njem mba ofesi na June 1, 2020, mgbe ọnwa atọ nke COVID-19 gasịrị, bụrụ mba ọsụ ụzọ na East Africa ịnabata ndị njem nleta iji chọpụta ebe ndị mara mma.
Nchịkọta akụkọ kachasị ọhụrụ sitere na ụlọ ọrụ nchekwa na njem nlegharị anya nke steeti na-egosi na France na-eduga na ọnụ ọgụgụ ndị njem nleta na Tanzania n'ime ọnwa atọ nke metụtara July, August na September 2020.
Onye na-ahụ maka nchekwa nchekwa mba nke Tanzania (TANAPA) nke na-ahụ maka pọtụfoliyo azụmahịa, Oriakụ Beatrice Kessy, kwuru na ndekọ na-egosi na ngụkọta nke ndị njem nlegharị anya 3,062 nke France gara n'ogige ntụrụndụ mba n'oge a na-enyocha, na-ewelite ọkọlọtọ France dị ka onye kachasị elu ndị njem mba ụwa. Ahia nke Tanzania n’etiti nsogbu a, rutere USA jiri ndị njem ezumike 2,327.
Nke atọ na ndepụta nke isi obodo ndị njem nleta na Tanzania na elu nke ọrịa ụwa COVID-19 bụ Germany na ndị ọbịa 1,317, UK na-esote ya na ndị njem nleta 1,051.
Spain, na nke ise, enyela Tanzania ndị njem nleta 1, 050, ndị India na ndị njem 844 na-enyocha ndị nyere ịma mma ala nke mba ahụ.
Switzerland nwere ọnọdụ nke asaa na ndị njem 727, ndị Russia na-esoro na nke asatọ na ndị ọbịa 669, Netherlands na ndị njem 431 nọ n'ọnọdụ nke itoolu na nke iri bụ Australia maka iwetara ndị ezumike 367 n'oge oge a na-atụle.
Njem nlegharị anya bụ onye na-akpata mgbanwe mba ofesi na Tanzania, na-eweta ihe ruru $ 2 na kwa ijeri kwa afọ, nke ruru nhata pasent 25 nke ihe niile a na-enweta na ngbanwe, gọọmentị data na-egosi.
Njem nleta na-enyekwa aka karịa 17.5 pasent nke ngwaahịa mba niile (GPD), na -emepụta ihe karịrị nde 1.5.
Dabere na UNWTO, nsogbu nke COVID-19 emetụtala mpaghara njem ahụ nke ukwuu ma nwee mkpa igbapụta na nkwado maka ịdabere na mgbake ya.
UNWTO na-eme atụmatụ nfu nke 850 nde na ijeri ndị njem nleta 1.1, nke ruru $ 910 ijeri na $ 1.2 ijeri na mbupụ nke mbata site na njem na-akpata ihe ize ndụ nke ịlafu 100 na 120 nde ọrụ njem ndị njem.
Nke a bụ nsogbu kachasị njọ njem nlegharị anya mba ụwa chere ihu kemgbe ndekọ malitere (1950).